China Back post corrector ubu nkwado nkwado belt factory na suppliers | AoFeiTe
Ikpere nkwado nkwado ikpere
Ikpere emem nkwado
Uwe nkwado Nkwado
Udo n'úkwù Nkwado
Mgbehu emem nkwado
Olu Nkwado Nkwado
Ogwe aka na ikpere aka
Nne na Nwa
Thkwụ apata ụkwụ
Nwa ehi ọla
Ọrụ trouser ikpere na mpe mpe akwa ubi na-agba egwú
Ikuku na-eku ume ụgbọ ala na-ezu ike ohiri isi
Sports ikpere support aka uwe nkwado neoprene weightlif ...
Back postctor corrector ubu na-akwado belt nkwado
Idozi imezi ubu lumbar
Neoprene ikpere aka uwe na-akwado nkwado
Mmiri mmiri:Mmiri mmiri
Ihe nchedo:Isiokwu Tennis Ball, Badminton, bọọlụ Tenis, Football, Bọọlụ Nkata
Ihe:Ọzọ, Neoprene, Magnetik nkume, na-agbanwe agbụ, Akpụkpọ anụ
Ebe Amalite:Hebei, China (Chile)
Njirimara:Na-eku ume, na-agbanwe agbanwe, Na-emeziwanye Ọdịdị Gị
Rụpụta:Factory na Export Service
Nha:SML XL XXL, Ndabere azụ
Okike:Universal, Posture Corrector, Universal, Enyemaka Mgbu Mgbu
Agba:Pink, White, Nwa, White, Nwa, Pink
Ọrụ:OEM / ODM, Nkwado Azụ
Akara:Ike ibipute Logo gị
Product aha:Back Posture Corrector Jirinụ Nkwado emem nkwado
Nkwakọ ngwaahịa:1 pc / opp akpa
Arụpụta:60000 Ibe / iberibe kwa ọnwa
Gbọ njem:Oke Osimiri, Ala, Ikuku
Ebe Mmalite:Hebei, China (Chile)
Tụkwasịnụ Ikike:60000 Ibe / iberibe kwa ọnwa
Akwụkwọ:EC / FDA / ISO9001 / ISO13485
Elu àgwà ọjọọ azụ Nkwado LumbarEzubere belt iji kwado ala ala na azụ elu, Posture Corrector a na-enye nkwado, nkasi obi na obi ụtọ iji belata ihe mgbu. Yiri nke aAkwado Nkwadodị mma maka mgbu azụ na ubu slouching. alaBack Nkwado echebeNdị ọkachamara na-ahụ maka mmerụ ahụike na ndị na-ahụ maka ahụike na-atụ aro mmezi magnetic posturere. Ihe na-agbanwe agbanwe ga-enye gị ọta ọzọ nke nkwụsi ike na nkwado, Ọgwụgwọ ọgwụgwọ nke neoprene dị elu tinyere 8 magnet nwere ike inye aka belata azụ mgbu ahụ.
Product aha: Ighachite azụ Ndozi eriri nkwado Nkebi nke.: AFT-B003 Ihe: Neoprene, na-agbanwe, eyi warara, kemeghi ubu eriri Agba: pink, White, Nwa Size: Unisize NW: 0.24kg / pc Ogologo: 86cm Obosara: 42cm Ngwugwu: 1 pc / opp akpa, 100bags / katọn Size Carton: 36 * 38 * 72cm Akwụkwọ: CE / FDA / ISO9001 / ISO13485
Correct guzo, ịnọdụ ala na ije ije.
Gbochie nrụrụ nke kọlụm azụ.
Mfe mmadụ ike gwụrụ.
Nye aka na mmepe na-eto eto.
Mee ka úkwù gị na azụ gị kwụ ọtọ.
Mbenata ala mgbu, slouching na hunching.
Anyị bụ ndị ọkachamara na nlekọta ahụike na orthopedic ngwaahịa dị ka Ikpere emem nkwado Nkwado, n'úkwù Back nkwado nkwado, Posture Corrector, Mkpụrụ Nkwado Nkwado, Ikiaka nkwado Nkwado, Mgbehu emem nkwadoNkwado, Nkwado Nkwado Nkwado, Olu Nkwado Nkwado na ihe ndị ọzọ. Ọzọkwa otu ọrụ njirimara anyị bụ ịhazi usoro. Anyị nwere ike ịmepụta ngwaahịa na njirimara imewe gị na igbe agba. Anyị na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ ogologo oge!
Na-achọ ezigbo Back Posture CorrectorEmeputa & soplaya? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. Ihe niile eji akwado nkwado nkwado bụ nkwado dị mma. Anyị bụ ndị China si Factory nke Back Post nkwado. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Ngwaahịa Ngwaahịa: Corrector Posture
Nke gara aga: Belt n'úkwù azụ maka nkwado azụ mgbu
Osote: Ngwunye Ngwunye Ngwunye Cervical Na-ekpo ọkụ Na-ekpo ọkụ
Ubu Nkwado Back Posture Corrector
Upper azụ postctor corrector clavicle support b ...
Kemeghi Posture Corrector akpụkpọ anụ Brace Oem ...
Healcare azụ support vest postcho mgbazi b ...
Ndabere na Ndozi Nduzi
mgbali Mbelata ndozi fixure postctor
N'ebe ọwụwa anyanwụ na n'akụkụ ndịda ọdịda anyanwụ nke anọ na NO.202 nke Gris na-akwado ogige ụlọ ọrụ mmepụta ihe, No.389 nke n'okporo ámá Hengshan, Mpaghara Ọgbara ọhụrụ, Shijiazhuang, Shijiazhuang, Hebei